Maraykanka oo ka Walaacsan Awoodda Al Shabaab
Dowladda Maraykanka ayaa aad uga walaacsan xagjirnimada Al shabaab iyo qaabab meleteri ee ay lasoo baxaan maalin kasta.
Ergayga Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo saxaafadda kula hadlay magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in Maraykanku aad uga walaacsan yahay Al shabaab.
James Swan ayaa shirkiisa Jaraa’id ku sheegay in xarakada al shabab ee Somalia ay wajahayaan cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhanka imaanaya dhanka ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM oo haatan qarka u saaran Magaalada Kismaayo.
“Dhabtii Xoogaga Al- Shabaab waa kuwo sii daciifaya oo ay awooddoodii wiiqantay mana muuqato tanaasul ay sameenayaan si loo soo afjaro dhibaatada somalia ka taagan”ayuu James Swan ku yiri shirkiisa jaraa’id , waxana uu intaasi ku daray in dowladda mareykanka AMISOM iyo kuwa Soomaalida ay ka caawineyso sidii ay u hano lahaayeen amaanka dalka somalia islamarkaana ay ka saacidayaan qalabeynta iyo tababarista ciidamada.
Ergayga Dowladda Mareykanka u qaabilsan arimaha Somalia James Swan ayaa shirkiisa jaraa’id waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamada AMISOM iyo kuwa soomaalida oo isbaheesanaya ay qarka u saaran yihiin qabsashada magaalada kismaayo oo la soo sheegayo saraakiishii Al-Shabab ay isaga baxeen gudaha Magaalada Kismaayo.
Maraykanka ayaa wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii September sanadkii 2001-dii lagu qaaday magaalada New York waxa uu dagaal kula jiray kooxaha islaamiyiinta ah ee ka dagaalama wadamo ay Soomaaliya kamid tahay.